HomeGolaha Wakiilada 1991
Ibrahin Maygaag Samatar Gudoomiyihii Golaha Wakiiladda ee 1991
Golaha wakiilada sanadkii 1991 oo ahaa golihii ugu horeeyay oo si ku meel gaadh ah loo sameeyay kadib, markii dawlad ku meel gaadh ah oo laga dhex doortay ururkii SNM la sameeyay la isku waafaqay shirar kala dambeeyay oo sanadkaa 1991 lagu kala qabtay magaalooyinka Barbara iyo Burco.
Golahaasi wuxuu ka koobnaa Golohii dhexe ee ururka SNM oo lagu daray toboneeyo xubnood oo ka soo –jeedda beelaha aan Isaaqa ahayn. Golahaa sharci-dejintu ee Dawlada ku meel gaadhka ah oo ay xaruntiisu ahayd Hargaysa waxay ku shiri jireen Maxkamadda Goodirka xarunteeda . fadhigii ugu horeeyay ee Golahaas waxay ku doorteen Gudoomiye iyo Xoghaye Guud waxayna magacyadoodu kala yihiin sidan:
Ibrahin Maygaag Samatar.
Rashiid C/lahi Guuleed.
Inkastoo shaqada goluhu isku mid yihiin oo sharci dejin, masuuliyiinta oo la ansixiyo iyo miisaaniyada oo la ansixiyo ay shaqadoodu u badan tahay golahaasi oo ahaa Golihii ugu horeeyay shaqa badan muuqaban wakhtiga lagu jiray awgeed.